Isilinganisi seFektri, abaxhasi - China Isingxobo seSihambisi abavelisi
UL & FM Uluhlu olunzima lomsebenzi weClevis kwendawo yokuhlala kwalenza
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, ii-hanger zomsebenzi wethu onzima zezi-ul & FM zivunyiwe. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma, eYurophu naseAsia. Kananjalo zinokulungiswa ngokweemfuno zakho, umzekelo, zinokuyilwa ngerabha, ukufaka okanye ikhaka. Kwaye kukho unyango olwahlukileyo oluphezulu kukhetho lwakho.
Uluhlu oludwelisiweyo loLuhlu loLuhlu lweNdawo yokuLungiselela ukuThengisa kwiFektri
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, ii-hanger zomsebenzi okhanyayo zokukhanya zixhomekeke kwi-ul. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kananjalo zinokulungiswa ngokweemfuno zakho, umzekelo, zinokuyilwa ngerabha, ukufaka okanye ikhaka. Kwaye kukho unyango olwahlukileyo oluphezulu kukhetho lwakho.